Soo Degso Adobe CS5 Master Collection oo Isbaanish u ah Mac | Abuurista khadka tooska ah
In kasta oo aad gasho bogga Adobe oo waxaad kala soo bixi kartaa oo keliya nooca Ingiriisiga ah ee Windows iyo Mac labadaba, had iyo jeer waxaa jira dad ka walwalsan raadinta dhammaan daldaloolooyinka suurtagalka ah iyo helitaanka feylka in badan oo naga mid ahi u baahan yihiin.
Iyada oo culeyskeedu yahay 10 GB, sawirka DMG ee Adobe na siinaya wuxuu noo oggolaanayaa inaan ku raaxeysano muddada tijaabada in loo isticmaalo dhammaan codsiyada ku jira Master Collection, uruurinta ugu dhammaystiran ee Adobe.
Shuruudda kaliya ayaa ah in lagu qoro www.adobe.com waqtiga soo dejinta, maadaama haddii kale uusan bilaaban doonin. Waxaan kaaga tagayaa iskuxiraha boodka kadib, usocoto diyaarinta saloolka, oo aan afkaaga kufurayo qabashada rakibaadda ee aan hada samaynayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Soo Degso Adobe CS5 Master Collection oo Isbaanish ah oo loogu talagalay Mac
Fariin weyn, runta waxaan u booqdaa boggan maalin walbo waxyaabaha muhiimka ah ee ay bixiyaan, tanina maahan mid ka reeban, kaliya waxaan qabaa su'aal, waxaan haystaa mac leh ururinta asalka cs4 asalka ah, haddii aan rakibo qolkan cs5 maxaa sameyn doona ku dhaca cs4? Salaan iyo mahadsanid kahor
Xidhiidhku ma shaqeynayo ... inkasta oo lagu jiro, wali wuu sii socdaa mana sameynayo wax kale ...
dhiig leh dijo
Wanaagsan, soo dejintu way bilaabantay! : D ...
Haye, wali ma jiro silsilad la jaan qaadi karta Luqadahaan Kala Duwan? Sababtoo ah waxaan haystaa taxaneyaal ah CS5 oo Ingiriis ah, laakiin uma maleynayo inay iswaafaqsan tahay ...
Ku jawaab dhiig
Waxaan horeyba u soo dajiyay ururinta sayidka 2 jeer mana ku guuldareystay inay kor u qaaddo sawirka, maxay noqon kartaa ??? Waxaan hayaa nooca Ingiriisiga ah oo la rakibay, dhib malahan, laakiin waxaan rabaa nooca Isbaanishka, ma aqaano waxa aan u oggolaan karin kordhinta salaanta sawirka
Si sax ah loo soo dejiyey si sax ah, kuwa aan soo dejisan karin ma aysan ogeyn inay marka hore ku soo galaan koontadooda adobe. waxayna u maleynayaan inay doonayaan inay sidaa u adeegsadaan.
Jawaab Julio Cesar
Waad salaaman tihiin, waxaan kaliya rabay inaan idiinka digo in galitaan kasta uusan isku mid aheyn, si aad u soo degsataan waa inaad gasho si aad u soo dejiso tijaabo kasta ka dibna waad soo degsan kartaa!
Ku jawaab Vlax
KRISTIA S. dijo
Hagaag, soo dejiso barnaamijka wax walbana waa hagaagsan yihiin, laakiin markii aan rabay inaan rakibo, waxay ogaatay inaan hore u lahaa mid hore oo aan dhammeeyay heerkayga tijaabada!
Ma jiraa qof iga caawin kara inaan ka boodo taas?
Jawaab CRISTIA S.
55 naqshadeynta websaydhka madow iyo caddaan yar